Moz Pro: na -eme nke ọma na SEO | Martech Zone
Njikarịcha Njin Search (SEO) bụ ubi dị mgbagwoju anya na-agbanwe agbanwe. Ihe ndị dị ka algorithms na -agbanwe agbanwe nke Google, ọnọdụ ọhụrụ, yana, n'oge na -adịbeghị anya, mmetụta ọrịa na -efe efe na etu ndị mmadụ si achọ ngwaahịa na ọrụ na -eme ka ịkpọgide otu atụmatụ SEO sie ike. Ndị ọchụnta ego ga -etinyerịrị ọnụnọ webụ ha nke ọma ka ha pụọ ​​iche n'asọmpi ahụ, ebe idei mmiri jupụtara bụ nsogbu maka ndị na -ere ahịa.
N'inwe ọtụtụ azịza SaaS n'ebe ahụ, ọ na -esiri ike ịhọrọ na họrọ nke bara uru yana nke na -ere oghere n'akpa ahịa gị. Ime ihe kachasị na atụmatụ ịre ahịa ịntanetị gị - yana mmefu ego ya - dị mkpa ka ị nọrọ na mmiri. N'inwe ọtụtụ igwe metrik na ihe dị iche iche ị ga -eburu n'uche mgbe ị na -ere ahịa n'ịntanetị, ị nwere ike furu efu na data na ngụkọ nke sọftụwia na -ekwusa ihe ngwọta akọwapụtara.
Ejiri Moz Pro rụọ ọrụ nke ukwuu, ịdị mfe nke iji, yana ịdị mma data iji nyere ndị ahịa aka inyocha data SEO na ngwanrọ siri ike iji nweta ọtụtụ ihe na ndepụta weebụ gị, webụsaịtị na mmefu ego gị.
Ịnweta data dị mfe
Backlinks bụ ihe kacha ekpebi ikike saịtị gị. Ha na -egosi uru na mmekọrịta yana ha nwere ike nyere aka webụsaịtị gị ka ọ nọrọ n'ọkwa dị elu na SERPs. A ọmụmụ nke onye zuru oke mere kwubiri n'oge na -adịbeghị anya na Moz nwere ndepụta data njikọ kacha ukwuu, 90% karịa nke abụọ kachasị. Ngwaọrụ ị na -eji nwere ike imetụta ọganiihu gị na SEO nke ukwuu, yana ọtụtụ data ị nwere ka mma ị nwere ike ịrụ.
Ka njikọ ndị a pụrụ ịtụkwasị obi na -atụ aka na saịtị gị, ọ na -adịrị ndị ahịa mfe ịchọta ya. Moz Pro na -akwụghachi azụlinks saịtị ọ bụla nke ọma na ibe gị ma gosipụta nke ị ga -edebe ma ọ bụ tufuo dị ka spammy.
Ọ na -ejikọkwa njikọ ngalaba ahụ, na -egosi gị ọtụtụ njikọ sitere na ngalaba karịa njikọ ugboro ugboro site na otu. Nke a bụ metric dị ike maka ndị ọkachamara SEO ka ọ na -enye nnọchite anya nke ọma nke ọnụnọ weebụ gị. Na mgbakwunye, Moz ngalaba ikike ngalaba ikike yana ikike ikike ibe na -enyere aka ịlele ike nke weebụsaịtị ma ọ bụ ibe ọ bụla yana myirịta karịa ndị ọzọ na SERPs.
Ihe Ngwọta nke Otu
Njirimara Moz Pro dị iche iche na obosara. Agbanyeghị, interface ahụ na -ejikwa ọtụtụ ọrụ ya site na iji atụmatụ dị mfe.
Ọpịpị abụọ bụ naanị ihe ịchọrọ maka isi ihe ọ bụla metụtara SEO nke ị nwere ike chọọ. Ihe dị na peeji, koodu ọnọdụ HTTP, metrik njikọ, akara atụmatụ, isi okwu…
Logan Ray, Ọkachamara Azụmaahịa Dijitalụ na Mgbama
Imebe taabụ a na -enweta bụ iji nyere onye ọ bụla SEO na ọkachamara ahịa aka, n'agbanyeghị ahụmịhe. Ngwaọrụ dị ka Keyword Explorer na-arụ ọrụ aka na njikarịcha na ibe, na-egosi ka ibe gị siri dị n'etiti ndị asọmpi na ebe ị nwere ike ịkwalite ọkwa SERP gị.
Ị nwere ike ịchọta nyocha saịtị, njikarịcha isiokwu, ọkwa, nyocha azụlink na ndị ọzọ, ha niile n'otu ebe. Inwe naanị otu ngwa maka ọtụtụ nsogbu na -akwụ ụgwọ onwe ya. Kama iji - si otu a na -azụta - ọtụtụ ngwa iji rụọ ọrụ dị iche iche, ị nwere ike ịchekwa oge na ego site na otu ngwakọta agwakọta nke ọma.
Igosi ọganiihu otu gị
Ọnụ ọgụgụ juru eju na eserese nwere ike inyere ndị agha SEO aka, mana oke data na -ama ọtụtụ. Isi okwu, ikike ngalaba, ịkwagharị saịtị, na ihe ndị ọzọ-igosipụta mmeri SEO ma ọ bụ mfu ụlọ ọrụ gị bụ nrụgide, ọbụlagodi mgbe ndị ọkachamara na-abụghị SEO ghọtara okwu okwu. Moz Pro na -arụ ọrụ iji mebie data dị mgbagwoju anya ma mee ka ọ dị mfe ịghọta ka njikọ na weebụsaịtị gị na -eme megide asọmpi ahụ.
Ebe ọrụ gị dị ka onye na -ere ahịa gụnyere igosipụta nchoputa gị, nyocha, na mmeri, Moz Pro gụnyere ngwanrọ mkpesa nke aka ya.
Njirimara mkpesa omenala na -enye anyị data anyị kwesịrị iji gosi na ọrụ na atụmatụ anyị ziri ezi…
Jason Nurmi, onye njikwa ahịa na Zillow
Site na idoanya ka mma, eserese dị mfe ịgbari ngwa ngwa, yana ihe enyemaka ndị ọzọ a na -ahụ anya, ọrụ mkpesa akụkọ Moz Pro nwere ike nyere aka kwupụta ebumnuche gị na mkpa gị nke ọma.
Moz anọwo na mmalite SEO n'oge mgbanwe mgbanwe igwe ọchụchọ niile. Ndị agha ochie na ndị bịara ọhụrụ ga-ahụta ọrụ ha kacha amasị site na ngwugwu na atụmatụ Moz Pro dị iche iche ka ha na-eme ka ihe ọhụrụ na mgbanwe SEO ọhụrụ dị ọhụrụ.
Malite nnwale Moz Pro efu gị
Tags: backlinksikike ngalabaKeywordsmoz prona -esi ísì ụtọsearch engine njikarịchaAseo n'elu ikpo okwu